प्रेम प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी गायिका सरु भन्छिन्ः सामाजिक सञ्जालविना बर्बाद हुन्छु
मनोरञ्जन , अन्तर्वार्ता
मनोज कुमार २८ फागुन ।
काठमाडौं । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमा गीत गाएर चर्चामा आएकी गायिका हुन सरु गौतम । विद्यालय तहदेखि नै विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापमा गीत गाएर सबैको मन जित्दै आएकी गौतमको एक दशकको अवधिमा अहिले सम्म दर्जनौ गीत बजारमा ल्याई सकेकी छिन् । पछिल्लो समय नेपाली गीतसंगीतमा आएको विकृती र सामाजिक सञ्जालले पारेको प्रभावका बारेमा गायिका सरु गौतमसँग जनतापाटीका लागी मनोज कुमारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
म अहिले मेरो नयाँ गीत ‘मेरो प्रेम प्रस्ताव’ को प्रर्वद्धनमा व्यस्त छु । यो गीत हिजोमात्रै दर्शकका लागि बजारमा ल्याएको छु । यसमै व्यस्त छु ।
गीत चर्चित हुनेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
यस गीतमा मेलै फरक गर्ने प्रयास गरेको छु । मेरो प्रेम प्रस्ताव बोलको गीत प्रेममा आधारित छ । माया प्रेमका गीत नै बजारमा बढी आउने गरेका छन् । त्यसैले गीत हिट हुनेमा विश्वस्त छु ।
गीत संगीतमा कसरी लाग्नु भयो ?
२०६२/०६३ सालमा म कक्षा ८ मा पढर्थे । त्यसबेला देशमा जनआन्दोलन चलिरहेको थियो । आन्दोलनका क्रममा काभ्रे जिल्ला स्तरीय प्रतियोगितमा गीत गाएर प्रथम भएँ । त्यसपछि एलएलसी पास भएपछि प्लस टु पढ्न काठमाडौँ आएपछि संगीतको कक्षामा लागेँ ।
तपाईले अहिलेसम्म गाएको गीतमध्ये चर्चित गीत कुन कुन हो ?
मेरा लागि त सबै गीत प्यारो छ तर दर्शक श्रोताले बढी मन पराएको गीतमध्ये ‘कागदाजै कागदाजै’, ‘के यो माया हो’, ‘तिम्रो र मेरो सम्बन्ध’ र ‘किन रुन्छ मन’ श्रोताले बढी मन पराएका गीत हुन् ।
पछिल्लो समय गायक गायिका नै मोडलिङ गर्छन नी ?
हो तपाइले भनेको जस्तै पहिला पहिला पैसा तिरेर व्यवसायिक रुपमा मोडललाई खेलाउने प्रचलन थियो, अहिले पनि छ तर गायकले यति धेरै नै लागानी गरिसकेपछि आफै खेल्ने रहरले गर्दा नी मोडलिङ गर्न थालेका हुन् । कतिपयले आफ्नो गीतमा अरुलाई पैसा दिनुभन्दा आफै गर्दा चर्चित पनि हुने र पैसा पनि जोगिने कारणले यस्तो गरेको हुनसक्छ । कोही कोहीले गायन र मोडलिङमा दुवैमा राम्रै गरेका पनि छन् जस्तो की रामकृष्ण ढकाल, प्रमोद खरेल, हेमन्त शर्मा ।
सामाजिक सञ्जालले गीत संगीतलाई चर्चामा ल्याउन कस्तो सहयोग पुर्‍याएकाे छ ?
सामाजिक सञ्जालले गीतलाई चर्चामा ल्याउन धेरै सहयोग पुर्‍याएको छ । फेसबुक, ट्विटर, युटुयुब लगायतका सामाजिक सञ्जालले गीतलाई चर्चा दिलाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । तपाई नै हेर्नुस न अहिले त युट्युबबाट नै गीत रिलिज गर्ने माध्यम बनेको छ । पहिला पहिला सिडी मार्फत गीत बजारमा ल्याउनु पथ्र्यो । तर अहिले सिडीको जमाना नै सकियो । एका देशको काहानी भयो सिडी ।
अहिलेसम्म कार्यक्रम गर्न कुन कुन देश जानु भयो ?
कार्यक्रमकै शिलशिलामा एसियाका विभिन्न देशमा गएर प्रस्तुती दिइसकेको छु । दुबई, मलेसिया, हङकङ, सिङ्गापुर, चाइना र थाइल्याण्ड गरि ६ वटा देशका विभिन्न शहरहरुमा कार्यक्रम गरिसकेको छु ।
विदेशको कार्यक्रम र स्वदेशमै गर्दा के फरक हुँदो रैछ ?
जहाँबाट अफर आउँछ हामी त्यही जान्छौँ मेलै पूर्वको विराटनगर, धरान, इटहरीदेखि सुदुरपश्चिको विभिन्न ठाउँ सम्म स्टेजमा आफनो प्रस्तुती दिइ सकेको छु । भने विदेशमा पनि प्रस्तुती दिएको छु । फरक के छ भने स्वदेशमा गीत गाउँदा आफ्नै गाउँठाउँमा गाए जस्तो लाग्छ भने विदेशमा गाउँदा हावापानी वातावरण फरक हुँदो रैछ ।
यो क्षेत्रमा लागेर जीवन निर्वाह गर्न कति सहज छ ?
जीवन निर्वाह गर्न गाह्रै छ । अहिले त यो क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको आगमन पनि धेरै भएको छ । प्रतिस्पर्धा तीव्र छ । हिट गीत गाएपनि गायकले कमाउने भनेको स्टेज कार्यक्रमबाट नै हो । त्यो स्टेज प्रोगाम नपाउँदा त गाह्रै छ जीवन चलाउन ।
पछिल्लो समय आएको ‘फ्रेनचाइज सो’ले गीत संगीतले राम्रा कलाकार जन्माउनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
फेनचाइज सो नेपाल आइडलको सिजन टु पनि सकिसक्यो । त्यसैगरि भ्वाइस अफ नेपालको पहिलो सिजन सकिएको छ र सिजन टुको लागि आवेदन खोलिएको छ । मलाई के लाग्छ भने यस्ता रियालिटी सोले युवापुस्तालाई संगीतमा लाग्न सहज भएको छ ।
यस्ता सोहरु आउँदा हाम्रा लागि पनि राम्रो हो र यसले लुकेर रहेका प्रतिभालाई उजागर गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ जस्तो लाग्छ । तर यस्ता प्रतियोगितमा भोटिङ्ग भन्दा पनि मेरो जोड कलालाई दिनुपर्छ भन्ने हो । जुन मान्छे गीत गाउन सक्छ त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जातीयता, क्षेत्रीयताको आधारमा दिनुहुँदैन । त्यसैले मेरो विचारमा कला भएको मान्छे यो क्षेत्रमा आउँदा नेपाली गीत संगीतको स्तर माथि उठ्नसक्छ ।
नेपाली गीतसंगीतमा रहेको विकृती हटाउनु के गर्नुपर्ला ?
पहिला जसरी रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा पास गरेर मात्र गीत गाउन पाइन्थ्यो । अहिले त्यस्तो छैन । पैसाको बलमा रहरले गीत गाउने क्रम बढ्दो छ । त्यसैले स्वर परीक्षा पास गरेर मात्र गीत गाउने सिस्टम हुनु पर्‍यो ।
तपाईलाई मन पर्ने गायक गायिका को को हुन् ?
मलाई मन पर्ने महिला गायिका अन्जु पन्त भने पुरुषतर्फ नारायाणगोपाल र प्रमोद खरेलका गीतहरु मन पर्छ ।
तपाईलाई मन पर्ने खाना ?
मलाई नेपाली खाना नै मन पर्छ । विशेषगरि गुन्द्रुक र सिन्की धेरै नै मन पर्छ ।
कुन मोवाईल प्रयोग गर्नुहुन्छ ?
म ओप्पोको एफ –९ मोवाइल प्रयोग गर्छु ।
टेली सिरियल कतिको हेर्नुहुन्छ । मन पर्ने सिरियल कुन हो ?
फुर्सदको समयमा टेलिसिरियल हेर्ने गरेको छु । विशेषगरि भारतीय सिरियल ‘शिलशिला र नागिन’ धेरै मन पर्छ । नेपाली सिरियलमा भद्रगोल, हर्के हवलदार हेर्ने गरेकी छु ।
भविष्यमा नेपाली गीतसंगीतमा लागेर राम्रा राम्रा गीत गाउने सोचमा छु ।